घरमा सेतो पुतली आउँछ ? साबधान आँखाको ज्योती गुम्न सक्छ -
घरमा सेतो पुतली आउँछ ? साबधान आँखाको ज्योती गुम्न सक्छ
समाचारपाटी, पोखरा, ३१ भदौ । आजकल तपाईको घरमा बेलुकाब बत्ती वरपर सेतो पुतली आउँछ ? त्यो हो भने सचेत रहनुहोस । केटाकेटीलाई ख्याल गर्नुहोस पुतली समाउन खोज्लान् र आँखाको ज्योति गुमाउलान् ।
अहिले पोखरा आसपासमा सेतो पुतलीको आतंक धेरै छ । यहि सेतो पुतलीको झुस आँखामा पर्यो भने आँखाको ज्योती गुम्ने खतरा हुन सक्छ । हिमालय आँखा अस्पतालमा यो वर्ष मात्रै ५/६ जना बिरामी यस्तै रोग लिएर आएका छन् । अस्पतालकी डाक्टर हरिमाया गुरुङका अनुसार यो रोग विशेषगरि केटाकेटीमा देखिएको छ ।
उनका अनुसार केटाकेटीले सेतो पुतली आएपछि केटाकेटीले समातेर खेलाउन खोज्ने हुनाले उनिहरुलाई यस्तो समस्या देखिने धेरै सम्भावना हुन्छ । केटाकेटीमात्र होइन यो पुतलीको झुस आँखामा पर्यो भने जसलाइ पनि समस्या हुन सक्छ ।
“पुतली बत्तीवरपर आयो भनेर यसलाई धपाउन तीर लाग्नु हुदैन”, डा. ग्रुङले भनिन् – “त्यसले झुस झार्ने र आफुलाई असर गर्नसक्छ, बरु मधुरो बत्ती बाल्ने, कसरी हुन्छ पुतलीलाई आउन नदिने गरि झ्यालमा जाली लगाईराख्ने गर्नुपर्दछ ।”
सेतो पुतलीबाट लाग्ने यो रोगको नाम ‘सापु’ हो । यो रोगबाट बच्नको लागि यो पुतलीबाट टाढा रहनु बाहेक अर्को उत्तम उपाय नै छैन । कथमकदाचित पुतली छोइयो वा ठोकियो भने हात राम्रोसंग धोएर आँखा सफा गर्ने र तुरुन्त अस्पताल जानु पर्दछ ।
यसैबीषयमा हामीले हिमालय आँखा अस्पतालका डाक्टर हरिमाया गुरुङसंग कुराकानी गरेका छौँ । हेर्नुहोस भिडियो ।
Previous Previous post: बुद्धलाई जिताउन यस्तो रणनीति ! कति भोटले जित्दैछन् बुद्धले हेर्नुहोस
Next Next post: जिरो किलोमिटरको आइल्याण्ड भत्काइयो
जनवरी १ः टोपी दिवस बन्दैछ नेपालीको पर्व
रेडियो प्रस्तोता तालिम सम्पन्न
सुरुङ खनेर घर भित्र छिरि एक महिला माथी बलात्कार
एमआरआइ गर्दै हुनुहुन्छ ध्यान राख्नुहोस् ! यी कुराहरु
सरकारी स्तरबाटै ‘रोजगारी भिलेज’को व्यवस्था , कतार जाँदा कामदारले एक रुपैयाँ पनि तिर्न नपर्ने
जुम्ल्याहा छोरी को हत्या गरि आमा शब्द लाई नै कलंकित पारिन कमलाले
म्याग्दी जिल्लालाई हिमाली क्षेत्रको सूचीमा राख्न सरकार समक्ष सिफारिस